၂၀၁၉ ခုနှစ် အော်စကာမှာ ကျိန်းသေဆုရမယ်လို့ တစ်ပြေးနေတဲ့ ရုပ်ရှင်ကား (၇) ကား - For her Myanmar
၂၀၁၉ ခုနှစ် အော်စကာမှာ ကျိန်းသေဆုရမယ်လို့ တစ်ပြေးနေတဲ့ ရုပ်ရှင်ကား (၇) ကား
တစ်ကမ္ဘာလုံးရင်ခုန်နေရတဲ့ အော်စကာဆုအတွက် တစ်ပေးခံနေရတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကောင်းတွေ
အော်စကာလို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ တစ်ကမ္ဘာလုံးက စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်ရတဲ့ ရုပ်ရှင်ဆုပေးပွဲကြီးမှန်း ယောင်းတို့ သိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကောင်းပေ့ အဆင့်မြင့်ပေ့ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေကိုသာ ဆုချီးမြင့်တာမို့လို့ အော်စကာဆုရ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဆို မျက်နှာပန်းလှတာ အမှန်ပါပဲ။ နှစ်ဆုသုံးဆုဆိုရင်တော့ အတိုင်းထက်အလွန်ပေါ့နော်။ ၂၀၁၉ ရဲ့ အော်စကာဆုပေးပွဲကို ဖေဖော်ဝါရီ (၂၄) ရက်မှာ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနှစ်မှာ ဘယ်ကားတွေက ဘာဆုတွေရမယ်လို့ တစ်ပေးခံနေရလဲဆိုတာ သိရအောင် ယောင်းတို့ကို ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ဗြိတိန်ဘုရင်မကြီးကတောင် အားပေးရတဲ့ Queen အဖွဲ့နဲ့ ပင်တိုင်အဆိုတော် Freddie Mercury ရဲ့အကြောင်းကို ရိုက်ပြထားတဲ့ အတ္ထုပတ္တိရုပ်ရှင်ပါ။ IMDb rating 8.2 တောင်ရရှိထားပြီး နာမည်ကျော်မင်းသား Rami Malek က Freddie Mercury အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ Stella သွားကြည့်တုန်းက ကောင်းလွန်းလို့ ကြက်သီးဖြန်းဖြန်းထခဲ့ရပြီး Queen fan တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကျေနပ်မှုရစေခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ပါ။ Best Actor award, Best Sound Mixing award တွေအတွက် တစ်ပြေးနေပါတယ်။
အနှစ်လေးဆယ်နီးပါး ပေါင်းသင်းလာတဲ့ ခင်ပွန်းသည်နဲ့အတူ ခင်ပွန်းစာပေနိုဘယ်လ်ဆု ယူရမယ့် Stockholm မြို့ကိုသွားရင်း သူ(မ)ရဲ့ဘဝမှာ ချမှတ်ခဲ့တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေက မှန်ကန်ရဲ့လားဆိုတဲ့အတွေးဝင်လာတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်အကြောင်းပါ။ အိမ်ထောင်သက်အတွင်း ဘယ်လိုကတိကဝတ်တွေ၊ လျှို့ဝှက်ချက်တွေ၊ သစ္စာဖောက်မှုတွေ ကြုံတွေ့ခဲ့ရလဲဆိုတာကို သေသေချာချာရိုက်ပြထားပါတယ်။ အသက် (၇၁) ရှိပြီဖြစ်တဲ့ မင်းသမီးကြီး Glenn Close ရဲ့ ပီပြင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့် Best Actress award ရမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။
အာဖရိကန်-အမေရိကန် စန္ဒယားပညာရှင်တစ်ယောက်က တောင်အမေရိကမှာ စန္ဒယားတီးဖို့ အကြောင်းဖန်လာတဲ့အခါမှာ ဒရိုင်ဘာအနေနဲ့ကော ဘော်ဒီဂတ်အနေနဲ့ကော လူတစ်ယောက်ကို ငှားဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။ အပြောမချိုတဲ့ အီတာလျံ – အမေရိကန်ကပြား နိုက်ကလပ် အပေါက်စောင့် လူကြမ်းကြီးကို ငှားမိတဲ့အခါ အကျင့်စရိုက်မတူညီတဲ့ လူနှစ်ယောက် ဘယ်လိုစခန်းသွားကြမလဲ၊ လူမျိူးခွဲခြားခံရမှုတွေကို ဘယ်လိုကျော်ဖြတ်ကြမလဲဆိုတာ တွေ့ရမှာပါ။ IMDb 8.3 ရရှိထားပြီး Best Supporting Actor ဆုအတွက် လျာထားခံရပါတယ်။
နယူးယောက်က လူမည်းတွေနေထိုင်တဲ့ Harlem ဆိုတဲ့ ရပ်ကွက်ကို အခြေပြုပြီး ရိုက်ကူးထားပါတယ်။ Tish ဆိုတဲ့ လူမည်းအမျိုးသမီးက သူ(မ)ရဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်းဖြစ်သူနဲ့ လက်ထပ်ဖို့ထိ ပြင်ဆင်ထားပြီးသားပါ။ ဒါပေမဲ့ သူ့ခင်ပွန်းလောင်းက မှားယွင်းစွပ်စွဲခံရပြီး ထောင်ကျသွားတဲ့အခါ သူ(မ)အိမ်မက်တွေ ရေစုန်မျောသွားရပါတော့တယ်။ ထပ်ပြီး သူ(မ)မှာ ကိုယ်ဝန်ရှိနေကြောင်းသိလာရတဲ့အခါ…IMDb 7.5 ရရှိထားပြီး Best Supporting Actress ဆုရနိုင်ခြေ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၁၉၇၀ အစောပိုင်းနှစ်တွေက မက္ကဆီကိုက လူလတ်တန်းစားမိသားစုတစ်စုရဲ့ အိမ်အကူအမျိုးသမီးအကြောင်းကို ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်ကျကျရိုက်ပြထားပါတယ်။ IMDb 7.9 ရရှိထားပြီး Best Picture, Best Director, Best Cinematography နဲ့ Best Foreign Language Film ဆုတွေအတွက် တစ်ကြိုပေးခံနေရပါတယ်။
ဒီကားကတော့ ကမ္ဘာမပျက်ခင်ကာလမှာ မကောင်းဆိုးဝါးတွေ ရန်ကလွတ်အောင် အသံလုံးဝမထွက်ဘဲ နေရတဲ့ မိသားစုတစ်စုအကြောင်းကို ရိုက်ပြထားတာပါ။ IMDb 7.6 ရရှိထားပြီး သရုပ်ဆောင်အနေနဲ့ John Krasinski နဲ့ Emily Blunt တို့ လင်မယားနှစ်ယောက်က ပါဝင်ထားပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ကားကတော့ Best Sound Editing ဆုအတွက် တစ်ပေးခံထားရတာပါ။
Marvel ရဲ့ Infinity War ကတော့ အထူးတလည်ပြောပြစရာမလိုတော့ဘူးထင်ပါတယ်နော်။ IMDb 8.5 ရရှိထားပြီး Best Visual Effect ဆုကို မျက်စပစ်နေပါတယ်။
ပြောပြပေးသွားတဲ့ အော်စကာတန်းဝင် ရုပ်ရှင်ကားတွေထဲက ဘယ်နှစ်ကားလောက် ကြည့်ပြီးကြပြီလဲ ယောင်းတို့ ….
References : Fox News , Oscars. Org , IMDB
တဈကမ်ဘာလုံးရငျခုနျနရေတဲ့ အျောစကာဆုအတှကျ တဈပေးခံနရေတဲ့ ရုပျရှငျကားကောငျးတှေ
အျောစကာလို့ ဆိုလိုကျတာနဲ့ တဈကမ်ဘာလုံးက စိတျဝငျတစား စောငျ့ကွညျ့ရတဲ့ ရုပျရှငျဆုပေးပှဲကွီးမှနျး ယောငျးတို့ သိကွမယျထငျပါတယျ။ နှဈစဉျနှဈတိုငျး ကောငျးပေ့ အဆငျ့မွငျ့ပဆေို့တဲ့ ရုပျရှငျတှကေိုသာ ဆုခြီးမွငျ့တာမို့လို့ အျောစကာဆုရ ရုပျရှငျဇာတျကားဆို မကျြနှာပနျးလှတာ အမှနျပါပဲ။ နှဈဆုသုံးဆုဆိုရငျတော့ အတိုငျးထကျအလှနျပေါ့နျော။ ၂၀၁၉ ရဲ့ အျောစကာဆုပေးပှဲကို ဖဖေျောဝါရီ (၂၄) ရကျမှာ ကငျြးပမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီနှဈမှာ ဘယျကားတှကေ ဘာဆုတှရေမယျလို့ တဈပေးခံနရေလဲဆိုတာ သိရအောငျ ယောငျးတို့ကို ပွောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။
ဗွိတိနျဘုရငျမကွီးကတောငျ အားပေးရတဲ့ Queen အဖှဲ့နဲ့ ပငျတိုငျအဆိုတျော Freddie Mercury ရဲ့အကွောငျးကို ရိုကျပွထားတဲ့ အတ်ထုပတ်တိရုပျရှငျပါ။ IMDb rating 8.2 တောငျရရှိထားပွီး နာမညျကြျောမငျးသား Rami Malek က Freddie Mercury အဖွဈသရုပျဆောငျထားပါတယျ။ Stella သှားကွညျ့တုနျးက ကောငျးလှနျးလို့ ကွကျသီးဖွနျးဖွနျးထခဲ့ရပွီး Queen fan တဈယောကျအနနေဲ့ ကနြေပျမှုရစခေဲ့တဲ့ရုပျရှငျပါ။ Best Actor award, Best Sound Mixing award တှအေတှကျ တဈပွေးနပေါတယျ။
ရုပျရှငျထှလောကို ဒီမှာကွညျ့လို့ ရပါတယျနျော…
အနှဈလေးဆယျနီးပါး ပေါငျးသငျးလာတဲ့ ခငျပှနျးသညျနဲ့အတူ ခငျပှနျးစာပနေိုဘယျလျဆု ယူရမယျ့ Stockholm မွို့ကိုသှားရငျး သူ(မ)ရဲ့ဘဝမှာ ခမြှတျခဲ့တဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြတှကေ မှနျကနျရဲ့လားဆိုတဲ့အတှေးဝငျလာတဲ့ မိနျးမတဈယောကျအကွောငျးပါ။ အိမျထောငျသကျအတှငျး ဘယျလိုကတိကဝတျတှေ၊ လြှို့ဝှကျခကျြတှေ၊ သစ်စာဖောကျမှုတှေ ကွုံတှခေဲ့ရလဲဆိုတာကို သသေခြောခြာရိုကျပွထားပါတယျ။ အသကျ (၇၁) ရှိပွီဖွဈတဲ့ မငျးသမီးကွီး Glenn Close ရဲ့ ပီပွငျတဲ့ သရုပျဆောငျခကျြတှကွေောငျ့ Best Actress award ရမယျလို့ ခနျ့မှနျးထားကွပါတယျ။
အာဖရိကနျ-အမရေိကနျ စန်ဒယားပညာရှငျတဈယောကျက တောငျအမရေိကမှာ စန်ဒယားတီးဖို့ အကွောငျးဖနျလာတဲ့အခါမှာ ဒရိုငျဘာအနနေဲ့ကော ဘျောဒီဂတျအနနေဲ့ကော လူတဈယောကျကို ငှားဖို့ဖွဈလာပါတယျ။ အပွောမခြိုတဲ့ အီတာလြံ – အမရေိကနျကပွား နိုကျကလပျ အပေါကျစောငျ့ လူကွမျးကွီးကို ငှားမိတဲ့အခါ အကငျြ့စရိုကျမတူညီတဲ့ လူနှဈယောကျ ဘယျလိုစခနျးသှားကွမလဲ၊ လူမြိူးခှဲခွားခံရမှုတှကေို ဘယျလိုကြျောဖွတျကွမလဲဆိုတာ တှရေ့မှာပါ။ IMDb 8.3 ရရှိထားပွီး Best Supporting Actor ဆုအတှကျ လြာထားခံရပါတယျ။
နယူးယောကျက လူမညျးတှနေထေိုငျတဲ့ Harlem ဆိုတဲ့ ရပျကှကျကို အခွပွေုပွီး ရိုကျကူးထားပါတယျ။ Tish ဆိုတဲ့ လူမညျးအမြိုးသမီးက သူ(မ)ရဲ့ ငယျသူငယျခငျြးဖွဈသူနဲ့ လကျထပျဖို့ထိ ပွငျဆငျထားပွီးသားပါ။ ဒါပမေဲ့ သူ့ခငျပှနျးလောငျးက မှားယှငျးစှပျစှဲခံရပွီး ထောငျကသြှားတဲ့အခါ သူ(မ)အိမျမကျတှေ ရစေုနျမြောသှားရပါတော့တယျ။ ထပျပွီး သူ(မ)မှာ ကိုယျဝနျရှိနကွေောငျးသိလာရတဲ့အခါ…IMDb 7.5 ရရှိထားပွီး Best Supporting Actress ဆုရနိုငျခွေ ရှိတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
၁၉၇၀ အစောပိုငျးနှဈတှကေ မက်ကဆီကိုက လူလတျတနျးစားမိသားစုတဈစုရဲ့ အိမျအကူအမြိုးသမီးအကွောငျးကို ဇာတျလမျးဇာတျကှကျကကြရြိုကျပွထားပါတယျ။ IMDb 7.9 ရရှိထားပွီး Best Picture, Best Director, Best Cinematography နဲ့ Best Foreign Language Film ဆုတှအေတှကျ တဈကွိုပေးခံနရေပါတယျ။
ဒီကားကတော့ ကမ်ဘာမပကျြခငျကာလမှာ မကောငျးဆိုးဝါးတှေ ရနျကလှတျအောငျ အသံလုံးဝမထှကျဘဲ နရေတဲ့ မိသားစုတဈစုအကွောငျးကို ရိုကျပွထားတာပါ။ IMDb 7.6 ရရှိထားပွီး သရုပျဆောငျအနနေဲ့ John Krasinski နဲ့ Emily Blunt တို့ လငျမယားနှဈယောကျက ပါဝငျထားပါတယျ။ ဒီရုပျရှငျကားကတော့ Best Sound Editing ဆုအတှကျ တဈပေးခံထားရတာပါ။
Marvel ရဲ့ Infinity War ကတော့ အထူးတလညျပွောပွစရာမလိုတော့ဘူးထငျပါတယျနျော။ IMDb 8.5 ရရှိထားပွီး Best Visual Effect ဆုကို မကျြစပဈနပေါတယျ။
ပွောပွပေးသှားတဲ့ အျောစကာတနျးဝငျ ရုပျရှငျကားတှထေဲက ဘယျနှဈကားလောကျ ကွညျ့ပွီးကွပွီလဲ ယောငျးတို့ ….
Tags: awards, Movie, oscar, review, winning